Wac 1300 585 868
oo bilaash ah
Hel casharo Ingiriisi
ah oo bilaash ah
oo aan xaddidnayn
Baro Ingiriisi si ay kaaga
caawiso inaad shaqeyso,
wax ku barato iyo aad ku
Waa maxay barnaamijka Ingiriisida ee Soo-galootiga Qaangaarka ah?
Miyuu kooraskani igu habboon yahay?
Goorma ayaan wax baran karaa?
Xagee ayaan wax ku baran karaa?
Sidee ayaan isu-qoraa?
Hel bilowga ugu fiican ee casharada Ingiriisida ee bilaashka ah
Barnaamijka Ingiriisida ee Soo-galootiga Qaangaarka ah (Adult Migrant English Program – AMEP)
Baro Ingiriisida caadiga ah si ay kaaga caawiso helitaanka adeegyada, inaad shaqeyso, wax ku barato iyo aad ku raaxeysato noloshaada Ustareeliya.
Ilaa iyo 510 saacadood oo ah casharo Ingiriisi ah oo bilaash ah
U baro Ingiriisi ku noolaanshaha, ka shaqeynta iyo waxka barashada Ustareeliya
Waxka ogow adeegyada dowlada iyo bulshada
Saacado casharo Ingiriisi ah oo bilaash ah oo aan xaddidnayn
Sameyso saaxiibo cusub inta aad wax baranayso
Qorshee mustaqbalkaaga Ustareeliya
Shuruudaha u qalmida ayaa lagu dabaqayaa*
Nasoo wac maanta si aad u hesho macluumaad ku saabsan ka bilaabida casharadaada Ingiriisida ee BILAASHKA ah STEPS 1300 585 868
Wakhtiyo Fasalo oo La Beddeli karo
STEPS waxay fasalo leh wakhtiyo la badeli karo ku bixisaa goobaheeda Casuarina iyo Palmerston – Fiiri Khariirada
STEPS waxay bixisaa fasalo leh wakhtiyo la beddeli karo si ay ugu habboonaato wakhtiyada qoyskaaga, shaqadaada, ama waxyaabaha kale ee aad barato. Waxaad heysataa doorashada aad fasalka ku dhigan karto maalintii ama habeenkii ee maalmaha iyo wakhtiyada kugu haboon adiga.
Fasalada Maalintii: Salaasa, Arbaca, Khamiis ama Jimce, 8:45am – 3:15pm
Fasalada Habeenkii: Salaasa, Arbaca ama Khamiis, 6pm – 9pm
Barnaamijka Ingiriisida ee Soo-galootiga Qaangaarka ah waxa maalgelisa Dowladda Ustareeliya waxaanuu siiyaa saacado casharo luqada ingiriisida ah oo bilaash ah oo aan xaddidnayn dadka soo-galootiga ah iyo kuwa bini-aadanimada ku yimid dalka ee u qalma. Haddii lagu siiyay fiise joogto ah ama aad u qalanto fiise kumeel gaar ah oo aad ku hadasho Ingiriisi yar ama aanad aqoon wax Ingiriisi ah, waxa laga yaabaa inaad u qalanto AMEP. Qaar kamid ah dhallinta soo-galootiga ah ee da’doodu u dhaxeyso 15 iyo 17 sanno jir ayaa sidoo kale laga yaabaa inay u qalmaan. Ogow haddii aad u qalanto casharada Ingiriisida ee BILAASHKA ah ee Barnaamijka Ingiriisida ee Soo-galootiga Qaangaarka ah.
Maxay ayaan Baran Doonaa?
Fasaladaada AMEP waxaad ku baran doontaa xirfadaha luqada Ingiriisida ee kaa caawin doona inaad si guul leh Ustareeliya ula degto dadka leh taariikh, khibrado iyo himilooyin kula mid ah. Waxaad baran doontaa qiimayaasha, dhaqanada iyo sharciyada Ustareeliya iyo mawduucyo kala duwan oo kuu fudeydin doona inaad ka shaqeyso, waxka barato iyo aad ku raaxeysato nolosha Ustareeliya. Qaar kamid mawduucyadan waxa kamid ah;
xirfadaha nolosha, dhaqanka, waayida qoys ama saaxiibo
maareynta lacagta iyo adeegyada bangiyada
gaadiidka dadweynaha ama wadista baabuurta
daryeelka ilmaha iyo nidaamka waxbarashada
nidaamka iyo adeegyada caafimaadka
sharciga iyo nidaamyada sharciyada
Dejiso warqada xayeysiiska ee AMEP